Muluu Salamoon: Beekumsaafi dandeettii qofaan osoo hin taane lubbuu kennuudhaaf duubatti hin deebinu - BBC News Afaan Oromoo
Muluu Salamoon: Beekumsaafi dandeettii qofaan osoo hin taane lubbuu kennuudhaaf duubatti hin deebinu
Madda suuraa, Fuula Feesbuukii Muluu Salamoon
Hojiin ambaasaadarummaa hojii cimaa biyya ofii bakka bu'uu waan ta'eef ittigaafatama lamummaa olaanaadha jedhu, Ambaasadar Muluu Salamoon.
Ambaasaadar Muluu Salamoon aanga'oota ambaasaadarummaa tibba kana muudaman keessatti argamu.
Mudamumaafi dhimmoota biraa ilaalchisuun BBC Afaan Oromoo Ambaasadar Muluu waliin turtii taasisaniin murannoo waamicha biyya isaanii tajaajiluu dhiyaate irratti qaban ibsaniiru.
Hojiin ambaasaadarummaa biyya ofii bakka bu'udha kan jedhan Ambaasaadar Muluun, kanaan dura dippilomaasii hawaasaa (Public diplomat)tiin, barnoota irratti, dhimma hawaasummaafi gargaarsa namoomaa akkasumas dhimmoota daldalaafi biizinasii irratti Itoophiyaafi Afriikaa bakka bu'uudhaan hojjechaa tureera jedhu.
'Kaampaasiin bakka namni guutuu itti ta'udha'
Bakka bu'ummaafi gita hojii hojjetaa turan akka fakkeenyaatti yoo kaasanis, Pirezedaantii Waldaalee Sekterootaafi Chaamber oof Koomersii Itoophiyaa, Pirezedaantii Ittaantuu Paan Afriikaa Chaamber oof Koomersii, Pirezedaantii Ittiaantuu COMESA Biizinas Kaawunsiil, Garee Gorsistootaa Baankii Addunyaa fi Jaarmiyaa Maallaqa Addunyaa kan Sab-Saharaa Afriikaa hojaataniiru.
Akkasumas dhaabbileen idil-addunyaa gargaarsaafi hawaasummaa irratti hojjetan gara garaa keessatti biyya isaaniifi Afriikaa bakka bu'uun hojjetaa waanan tureef hojiin amma akka ambaasaadaraatii hojjechuuf itti waamame kun rakkoo hin qabu jedhu.
"Hunda caalaa garuu garaa qulqulluun deemtee kan hin beeknes barattee hojjechuun waan danda'amuuf, ilaalaacha qajeelaafi ga'umsan qabuun gahee koo nan ba'adha.''
Kana malees, ''kanan hin beeknellee nama hunda irraa barachuuf fedha waanan qabuuf waanta biyyaaf ta'a jedhee yaadu irratti amansiisuufi tooftaa barbaachisu falachuun jijjiirama nan fida jedheen yaada," jedhaniiru.
Ambaasaaddar Muluun leenjiifi qajeelfama kennamuufiin cinaatti hojii dubbisuun caalmaatti koo irratti of cimsaa akka deeman himu.
"Yeroo biyya ambaasaaddarummaan akka tajaajilu itti ramadame adda baafadhus karaa carraa muuxannoofi milkaa'ina biyya sana jiru gama barnootaan, siyaasaa, daldalaafi tekinooloojiin biyya koof ni fayyada kan jedhu karooraanan hojjedha," jedhan.
Karoora waliigalaa akka dippilomaatii tokkootti maal hojjechuun irra jiraatu akka baafataan kan himan Ambaasaadar Muluun, erga biyyan itti ramadamu adda baafaniin booda ammoo ''biyyi keenya biyya sanaarraa maal barbaaddi, lammiileen Itoophiyaa biyya sana jiru maal barbaada, rakkoon achi jiru maalidha, rakkoo jiru akkamiin furra, dhiibbaa barbaachisu uumuudhaaf maaltu ta'uu qaba kan jedhaniif karoora baafachuufan jira'' jedhu.
Kanaan dura gitawwan aangoo gurguddaa akka pirezidaantii, ministeeraa, walitti qabaa boordii filannoo, pireziidaantii yunvarsiitiifi kan biroo hedduu irratti akka tajaajiltu gaafatamaa turu isaaniileen ni yaadatu Ambaasaddar Muluun.
"Ani garuu dubbii akkasii waanan hin fudhanneef jira. Osoo Dr. Abiy gara aangootti hin dhufiin waamichi naaf taasifamee ture. Ani ammoo fudhachuu hin dandeenye.
''Sababiin isaas, hangan bilisaan hojjechuu hin dandeenyetti ajaja paartiin dabarsu qofaan hin hojjedhu. Kanafuu, beekumsa kootiin osoo hintaane kan abbaan fedhe bukeessee tolchuun ittiin gubachuun narra hin jiru jedheen dide," jedhan.
Kaabinee Ministira Muummee Dr. Abiy keessa hirmaannaan dubartootaa kan dhiiraan waliin walqixa ta'uttis akka gammadan kan dubbatan Ambaasaaddar Muluun, baroota duraa hirmaannaa dubartootaa aangoo mootummaa keessatti akka cimuuf gaaffii yeroo dheeraa gaafachaa turuulleen BBC'tti himaniiru.
Ambaasaadar Muluun Salamoon barnootaan yeroo ammaa kanattis waraqaa qorannoo doktoraa isaanii hojjechaa jiru. Sadarkaa Maastersiitti ammoo Misoomaafi Naannoo (Environmental Development) kan baratan yoo ta'u, Digirii jalqabaa ammoo Akkaawontingiifi Biizinzas Manaajimantii baratan.
Waamicha akka biyya tajaajillu waggaa sadii dura dhiyaateef ture hin fudhatiin diduun, kan ammaa kanaaf garuu beekumsaafi dandeettii qofaan osoo hin taane ''lubbuu keenya kennuudhaaf duubatti hin deebinu," jedhan.
Barnoota idilee barataniin alattis dameewwan akka gaggeessummaa, intarpirinarshippii, fi kanneen biroo irratti leenjii hedduu yunivarsiitota, aanga'oota mootummaafi miseensota paarlaamaa leenjisaa turaniiru.